Mill Finished Aluminum / Aluminum Disc Circle - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Famaritana ny faribolan'ny alimo
1050 1060 1100 3003 Aluminium ho an'ny sakafo fitaovana
4. Ampidiro: 120mm - 1000mm
5. Karazana: Discs, taratasy, tebiteby, takelaka, tapa-kazo
Ny Aluminium Round dia azo alaina ao amin'ny fanondranana entana, mandrakotra papier mainty sy sarimihetsika plastika. Farany, ny alim-by Aluminium dia voaorina amin'ny kitapo hazo hazo / hazo.
Ny mpitarika any Shina sy ny mpamatsy voafantina voalohany amin'ny sehatra iraisam-pirenena!
F: Inona no isa be indrindra?
A: 5 taonina.
F: Inona no atao hoe delivery time?
A: 30 andro taorian'ny fametrahana. Ankoatra ny fetim-bahoaka.
F: Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitao?
A: Manana rafitra fitsapam-pahaizana matanjaka izahay, avy amin'ny fitaovam-materialy ka hatramin'ny vokatra vita, ireo fitaovana dia tsy maintsy hosihanina sy hosorain'ny vahoaka QC.
F: Ho hafiriana no azoko ambara?
A: Azo ambara fa tsy mihoatra ny ora 24 ny fepetra ahafantarana ny zavatra takiana amin'ny antsipiriany rehetra.
F: Afaka mahazo santionany ve aho?
A: Eny manolotra nomerao malalaka. Ny vidin'ny fandefasana dia alaina amin'ny mpanjifa.
F: Nahoana aho no afaka matoky anao sy mametraka filaminana aminao?
A: From 1997 to 2018 ny orinasa dia manana traikefa tamin'ny taona 20 tao amin'ity orinasa ity, nanompo mpanjifa avy amin'ny firenena 100 izahay, ny orinasanay dia fantatra amin'ny kalitaony ary ny ekipanay dia mahazo ny fahatokisan'ireo mpanjifa amin'ny fahatsoran'ny fahamendrehana sy ny raharaham-barotra eto an-tany fomba.
Ny tombontsoa ankapobeny
(1) Ny valin'ny tsena madinidinika: Ny orinasa, toy ny mpanamboatra, dia afaka mifandray mivantana amin'ny mpanjifantsika, rehefa avy fantarina momba ireo tarehimarika ara-dalàna / fari-pitsipika azo avy amin'ny mpanjifantsika, dia afaka manamboatra tahiry mialoha. Noho izany dia azo antoka ny fandefasana entana amin'ny andro 30 amin'ny filaminana ara-dalàna avy amin'ny mpanjifa, izay manome antoka tanteraka ny fitakian'ny mpanjifa ny fotoana iatrehana.
(2) Advantista Tsara: Ny fifandraisana eo amin'ny orinasa roa mivantana dia afaka manao fifandraisana haingana sy mahomby. Ny milina mangatsiaka mangatsiaka dia afaka manondraka ilay tady miaraka amin'ny max. dika fidirana amin'ny 8.0mm ary min. fivoahana matevina amin'ny 0.15mm miaraka amin'ny fandeferana matevina amin'ny ± 2 --- 18μm. Ny fametrahana ambony dia mety ho 7 --- 10 I-units; Ny hery mihidy ambony dia 20000kN; Ny haavon'ny haingam-pandeha dia 1800m / min, miaraka amin'ny fanaraha-maso an-tsisim-panaovana ny fanaraha-maso amin'ny dingana manontolo izay afaka manampy ny vokatra ho antsika mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny vokatra avo lenta toy ny vatana,
(3) Advantique de service avantatra: Mampanantena valinteny sy valiny haingana ny orinasa misy anay mandritra ny roa andro raha misy fanoherana tsara, dia handamina ny fialan-tsasatra araka ny toe-javatra tena izy, raha ilaina, ao anatin'ny fotoana fohy indrindra mba hahazoana antoka ny famelomana anao.
Izahay dia manolo-tena hanome vokatra tsara sy serivisy mpanjifa izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Manolo-tena amin'ny mpanjifa voafantina izahay amin'ny fanolorana vahaolana tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Miarahaba ireo fahafahana hifanakalo hevitra amin'ny mpanjifa amin'ny soso-kevitra momba ny raharaham-barotra izay hahazo vokatra tsara kokoa ho an'ny rehetra voakasik'izany. Manolotra ny mpanjifanay amin'ireo vokatra sy vahaolana mahafa-po indrindra izahay!